Indlela ukususa izinwele endaweni bikini: amacebiso awusizo
Ubuhle, Ukunakekelwa kwesikhumba
Isifiso ukubukeka emuhle futhi uzilungise baqhutshwa ngokuphelele yonke intombazane nowesifazane. Sikhetha izimonyo, ukwenza izinwele zakhe kanye makeup sihle zikanokusho ukuheha ukunakwa. Ngisho going to the beach, owesifazane ufuna ukuba amahle kakhulu. Futhi lapha kuba nenkinga, okuzoxoxwa esihlokweni lanamuhla. Akukhona neze ukukhetha ukwakheka kwesokudla, futhi ukwazi kanjani ukususa uboya endaweni bikini. Phela, swimsuits yesimanje ithungwe njengoba evulekile ngangokunokwenzeka, ngakho ake kuzo zonke izinto ezinhle babe izinwele ebonakalayo, noma kunjalo engenakwenzeka. Yingakho abesifazane iya ku ubuhle nokucwala ukhokhe imali eningi ukuze balahle yalesi enkingeni. Futhi lokhu akwenziwa ngezinkulumo nje kuphela ukuze zidonse ukunaka kwanoma isikhumba bushelelezi, kodwa futhi ngoba ukuthembela kwakho. Ngakho-ke, ulwazi kanjani ukususa izinwele endaweni bikini ekhaya, kungaba wusizo kakhulu nawe, ikakhulukazi uma ungafuni ukuchitha imali salon ezibizayo.
Kukhona izindlela eziningana emzini izinwele ukususwa, okuyinto sizobe bakutshele okwengeziwe. Kodwa kuyafaneleka ukuthi bonke bangabafundi kancane kunokuphakela izindlela salon. Ngokwemvelo, ngosizo imishini ekhethekile ususa izinwele ngokuphelele futhi unomphela, futhi ukusetshenziswa kwanoma yiliphi ikhambi ekhaya kanjani ukususa izinwele, ezivumelekile ngesonto esiphezulu futhi kumele njalo okuphindaphindiwe.
Ngakho ukuchaza kanjani ungakwazi ukuqeda izinwele:
Indlela yokuqala futhi elula kanjani ukususa izinwele endaweni bikini - ukushefa. Kulokhu-ke kungcono ukusebenzisa insingo madoda, njengoba eziklanyelwe ukukhipha ikhava kanzima. Ngaphambi ukuqala ukushefa obuseduze ugeza. Kuyokusiza ekuvuleni izimbobo zesikhumba futhi ukunciphisa soreness. Qinisekisa ukuthi usebenzisa i-ijeli ekhethekile noma Foam. Ngemva ukushefa, udinga futhi aphathe isikhumba ukusiza ukuvimbela ukucasuka. Nokho, le nqubo kuba okwesikhashana, futhi ngemva kwezinsuku ezimbili kuphela, ungaqala wonke kusukela ekuqaleni.
indlela Okuningi ngempumelelo kanjani ukususa izinwele endaweni bikini kuyinto ukhilimu ekhethekile depilatory. Bayidayise cishe njalo makha esitolo ngentengo ephansi. Iziqondiso bayolotshwa phansi ngokuningiliziwe lokho futhi kanjani ukusebenzisa, zingaki futhi yini ukudubula. Ngenxa yalesi ukhilimu, ungakwazi bayakhohlwa izinwele kufanele izinsuku 4-5.
Amantombazane amaningi ucabange indlela ukususa izinwele endaweni bikini, khetha epilator. Le idivayisi ekhethekile mechanical elikuvumela ukuba balahle izinwele ngokushesha futhi amasonto ambalwa. Nokho, inawo nezihibe - nezinqubo lokuqala kakhulu naye kubuhlungu, kuze kube manje kusukela ngamunye efana ngendlela ukufeza ubuhle.
4. esetshenziswa ngaphambi ukuhlala uthokomale ufunde emuva ku fashion. Nakuba le ndlela ka ukususa izinwele kuthatha isikhathi esiningi, kodwa umphumela iyabonakala ngokubona okubonakala ngeso lenyama, futhi izinwele kungenziwa ukhohliwe, kanye ngemva epilator, amasonto ambalwa. Minus - ubuhlungu futhi ukuvela kungenzeka yokucasuka. Plus - uwena olawula inqubo futhi kungaba ziveza ngisho ke "izinwele."
5. Futhi indlela ikhaya lokugcina lezithunywa ukuqeda izinwele ezindaweni obuseduze - edumile wax depilation. Le nqubo ebuhlungu kakhulu, kodwa ubuhle abafuna ngenkani izisulu. Zonke kakhulu emva izinwele ngeke baphazanyiswe amasonto amathathu, futhi ngenxa yalokho eningakuthwala. Ukusebenzisa emapheshana kufanele kuqala ugeza ukuvula ikhule ezimbotsheni. Khona-ke, esayithini nezinwele ethe njo strip futhi ngokuhamba kwesikhathi kakhulu ukususwa.
Manje uyazi ukuthi ukususa izinwele endaweni bikini. Yeka indlela ukukhetha - unquma!
Kanjani ukuqeda freckles sisodwa ekhaya?
Indlela ukuhlanza imibimbi ngaphansi kwamehlo abo bonke izindlela zanamuhla
Collagen umjovo ubuso: Izibuyekezo
Yokukhipha izinwele zomzimba: ukubuyekezwa, ubuhlungu. Laser hair ukususwa bikini, underarms: ukubuyekeza nezincomo
Tattoo "Umdlavuza": incazelo ethile, isicelo isayithi
Ukugoqa lesikwa - indlela eyanele ukuthola ukumodeliswa
Kungani uhlu ukulungisa
Lesizalo fibroids: usayizi izindleko zokuhlinzwa kwakho. Lesizalo fibroids: zamanje ukwelashwa
Ukuqoqa zemali limnandi
Isijeziso somshuwalense owedlule ngo-2015
Esasinenjini "Umoya ohelezayo": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza
Kuliphi itafula le-forshemak classic lizojabulisa izivakashi ngokujabulisayo
"Abantu bomdabu": abalingisi be-melodrama enhle kakhulu
Kolumb Hristofor futhi ekutholakaleni Melika
Indlela yokusebenzisa i-Skype: Ulwazi Basic
Ishadi Lezingubo Engingazigqoka. Izinganekwane izinkolelo
Yini igcwele ukuthola lesizalo fibroids ngesikhathi sokukhulelwa.
Uyini leek. Incazelo izitshalo, impahla ewusizo